Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Jazeera Airways waxay ballan qaaday 28 diyaaradood oo cusub oo A320neo ah
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Kuweyt Kuweyt • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka
Jazeera Airways waxay ballan qaaday 28 diyaaradood oo cusub oo A320neo ah.
Is-afgaradka waxaa saxiixay Rohit Ramachandran, madaxa fulinta ee Jazeera Airways iyo Christian Scherer, madaxa ganacsiga ee Airbus iyo madaxa Airbus International.
Jazeera Airways waxay ku faraxsan tahay inay sii kordhiso xidhiidhka muddada fog ay la leedahay Airbus dalabkan cusub ee muhiimka ah.
Heshiiskii ugu dambeeyay wuxuu ku dari doonaa 28 diyaaradood oo Airbus oo dheeri ah Jazeera Airways all-Airbus flet.
Qaadashada labada ikhtiyaar ee A320neo iyo A321 neo Jazeera Airways waxay yeelan doontaa dabacsanaan weyn si ay u fidiso shabakadeeda meelaha ay ka soo rarto meelaha dhexe iyo kuwa dheer ee Kuwait.
Airbus waxay la saxeexatay Heshiis Isfahan (MoU). Jazeera Airways, side Kuwait-based, oo loogu talagalay 20 A320neos iyo sideed A321neos.
Is-afgaradka waxaa saxiixay Rohit Ramachandran, madaxa fulinta Jazeera Airways iyo Christian Scherer, madaxa ganacsiga ee Airbus iyo madaxa Airbus International.
Marwan Boodai, Gudoomiyaha Jazeera Airways ayaa yiri “Jazeera Airways waxay ku faraxsan tahay inay sii kordhiso xidhiidhka muddada dheer ay la leedahay Airbus dalabkan cusub ee muhiimka ah. Waxaan si wax ku ool ah u labanlaaban doonaa cabbirkeena hadda jira 35 diyaaradood marka la gaaro 2026. Diyaaraddu waxay si xooggan uga baxday masiibada Q3 iyadoo dib ugu soo laabanaysa faa'iidada. Waxa inoo socda qorshayaal ballaadhineed oo xiiso leh, kuwaas oo kor u qaadi doona ka qayb qaadashada dhaqaalaha Kuwait iyo gaar ahaan qaybta socdaalka.”
"Waan ku hanweynahay inaan kordhino iskaashigayada Jazeera Airways iyada oo loo marayo heshiiskan ugu dambeeyay kaas oo ku dari doona 28 diyaaradood oo Airbus dheeraad ah dhammaanteed Airbus maxalli ah”, ayuu yiri Christian Scherer, Madaxa Ganacsiga ee Airbus, iyo Madaxa Airbus International. "Qoyska A320neo shaki la'aan waa meesha ugu fiican ee lagu taageero qorshooyinka kobaca ee Jazeera Airways. Tani waa sawirka ugu fiican ee sida Airbus ay u caawiso gelbinta kobaca macaamiisheeda guusha leh. "
Rohit Ramachandran, Maamulaha Guud ee Jazeera Airways ayaa intaa ku daray, "Marka la qaato labada A320neo iyo A321 neo fursadaha, waxaan yeelan doonaa dabacsanaan weyn si aan u fidinno shabakadeena meelo dhexdhexaad ah iyo kuwo dheer oo ka socda Kuwait, oo siiya rakaabka doorasho badan oo ay ku safraan oo ay ku raaxaystaan ​​meelaha caanka ah inta aan la helin. ”.
Jazeera Airways waxa ay shaqadeeda bilowday 2005tii waxa ayna tan iyo markaas u soo shaacbaxday in ay hormuud u tahay duulimaadyada gobolka. Waxay ka hawlgashaa gobol ahaan iyo caalami ahaanba u adeegta Bariga Dhexe, Yurub iyo Aasiya meelaha ugu sarreeya ee loo tago iyada oo ka timid saldhigga Kuwait. Diyaaradda Kuwaiti waxay taageertaa hiigsiga 2035 ee dalka si loo kordhiyo dhaqaale iyo u beddelka xarun ganacsi.
Qoyska A320neo waxay ku daraan tignoolajiyada ugu dambeeyay oo ay ku jiraan matoorada jiilka cusub, Sharklets iyo aerodynamics, kuwaas oo si wada jir ah u bixiya 20% kaydinta shidaalka iyo dhimista CO2 marka loo eego jiilkii hore Airbus diyaarad. Qoyska A320neo waxay ka heleen in ka badan 7,400 dalabaad oo ka yimid in ka badan 120 macaamiil.